Waa Maxay sababta Daniel Levy uu taleefoonka uga wacay maamulka Real Madrid si uu uga codsado iney iibsadaan Christian Eriksen? – Gool FM
(London) 30 June 2019. Wax badan ayaa isbadalay, taasina waxey cadeyn u tahay in maamulka Spurs ay taleefoon kula xiriiraan dhigooda Real Madrid iyagoo u bandhigaya iney iibsadaan xiddiga reer Denmark Christian Eriksen, waana xiddig ay kooxda caasimadda gorgorisay fasalkii lasoo dhaafay.
Gudoomiyaha SPurs Daniel Levy ayaa taleefoonka kula xiriiray agaasimaha guud ee Los Blancos – Jose Angel Sanchez, isagoo u bandhigay iibka Eriksen.
27-jirkaan heerka caalami ayaa diiday inuu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa, wuxuuna ka dhacayaa bartamaha sanadka soo aadan, waxeyna ka dhigan tahay in Spurs ay ka walwalsan tahay xaaladda xiddigaan maadaama ay 12-bilood kadib si xor ku weyn karto.
Spurs waxey kaliya dooneysay iney xagaagii hore ku bixiso xiddigaan 150 Malyan oo Yuuro, balse hadda qiimo jab ayaa ku dhacay maadaama uu heshiiskiisa dhaw yahay, kaliya 70 Malyan ayaa lagu heli karaa.
Los Blancos ma qorsheyneyso iney dalabka aqbasho, balse waxey isku dayi doontaa saxiixiisa hadii ay ku fashilanto saxiixyada Paul Pogba iyo Donny Van de Beek.
Dhanka kale waxaa jira warar hoose oo sheegaya in maamulka Spurs ay diidan yahiin in kooxaha Premier League ay xiddigaan la saxiixdaan, kaliya Red Devils ayaana si adag loola xiriirinayaa oo badal uga dhigi karta Pogba hadii uu ka guuro Old Trafford.
Warbixin: Man United oo dalab ka gudbineysa mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Barcelona - waa kee?